नेपालमा विद्युतको संभावना देखाउने कुलमानको कार्यकाल सकिँदै – Enepali News
July 28, 2020 95
अन्धकारमा बसेका नेपालीका घरघरमा उज्यालो पुर्याएर वास्तविक हिरोको रुपमा जनजनमा बसेका लोडसेडिङ किलर कुलमान घिसिङको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि आगामी भदौमा सकिँदैछ । २०७३ भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल आउँदो भदौ २९ गते सकिन लागेको हो ।
नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य, रुग्ण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेको, विद्युत चुहावट घटाएको, चरम घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको लगायतका कामबाट जनताले सर्वाधिक रुचाएका र नेशनल हिरोको उपाधि पाएका ब्यक्ति हुन् कुलमान घिसिङ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएकै वर्ष काठमाण्डौ उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गरेर वाहवाही कमाउन शुरु गरेका कुलमानले आफ्नो कार्यकालभरी चर्चैचर्चा बटुलिरहेका छन् ।
हिउँदमा दैनिक १८ घन्टा र बर्खायाममा समेत दैनिक ८ घन्टा लोडसेडिङको समस्या खेपिरहेको नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरिनु कुनै चमत्कार भन्दा कम थिएन । एक किसिमले सम्भव नै छैन होला भन्ने मानसिकतामा पुगि सकेका नेपालीलाई झलमल विजुली दिन सफल कुलमान लोडसेडिङ किलर बन्न पुगे । अहिले वर्खायाममा बिजुली बेच्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, त्रिशूली थ्रि ए लगायतका रुग्ण जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरेका कुलमानले प्रशारणलाइन र सबस्टेसनको निर्माण र मर्मतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका थिए ।
कार्यकाल सम्हाल्दा ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई घिसिङले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सम्म ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफामा लगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित नोक्सानी रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा १५ अर्ब २२ करोडमा झार्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा ३५ अर्ब ७ करोड आम्दानी रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७५–७६मा ७३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुमार्फत निर्माण हुन लागेका १४० मेगावाटको तनहुँ, ४० मेगावाटको राहुघाट र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्रि बी जलविद्युत आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२ दशमलव ५ मेगावाटको सान्जेन र १४ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजना छिट्टै निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् ।
कुलमानकै कार्यकालमा ढल्केबर २२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मुजफरपुर ढल्केबरलाई २२० के.भी. मा चालु गरिएको छ । कटैया कुशाहा १३२ के.भी. दोश्रो सर्किट र रक्सौल परवानिपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइनहरुको निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल र बिहारबीच विद्युत आदानप्रदानको क्षमता विस्तार भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकमा जथाभावी रुपमा राखिएको तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम भइरहेको छ । स्मार्ट मिटरको काम अघि बढेको छ । यस्ता कयौं काम भइरहेका छन् । यी सवैको सफलताको पछाडि कुलमान खम्बा जसरी उभिएका छन ।
विजुलीकै गतिमा काम गरिरहेका कुलमानको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नागरिकमा कौतुहता बढेको छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । विद्युत खपत बढाउने र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई बढावा दिने योजनासहित अघि बढेका कुलमानको कार्यकाल अर्को महिना सकिनै लाग्दा आउँदो नेतृत्वले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने जिज्ञासा उठेका छन् । कुलमानलाई सरकारले अर्को कार्यकालको लागि नियुक्त गर्ला कि नगर्ला भन्ने अड्कलबाजी पनि सुरु भएको छ । कुलमान घिसिङलाई अर्को ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ती गर्नको लागि कुनै ऐन, नियम बाधक छैनन् । मात्रै विभागीय मन्त्री वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा भर पर्नेछ ।
यो निर्णयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको समूहका नेताहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहने छ । विगतमा पूर्व माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही माननीयले कुलमानको शेखी झार्न नै होला सायद उनीमाथि अनियमितता जस्तो गम्भिर आरोप लगाएका विद्युत छाड्न चेतावनी नै दिएका थिए । प्रमाणविनाको चेतावनी ती माननीयले कहाँ कतै पुष्टि गर्न सकेनन् । त्यसैले मानीययको आरोपबाट न कुलमान विचलित भए न सरकार न सत्तारुढ दलले नै कुलमानमाथि शंका गर्याे । तर अहिले परिस्थिती फेरिएको छ । पार्टीमा जुहारी चलिरहेको छ । आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरविरोध अन्त्य गर्न हम्मे परेको ओली र उनको सरकारले कुलमान घिसिङको विषयमा कसरी निर्णय लिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
Prevनेपालमा कोरोनाबाट थप एक जनाको मृत्यु, निधन हुनेको संख्या ४९
Nextच्याउ खाँदा बिरामी परेका एकै घरका थप तीनजनाको मृत्यु, चारको उपचार हुँदै
कोरोना भ्याक्सिनको उत्पादन नै सुरु, चीन र भारतसहित ७ वटा कम्पनीमा उत्पादन हुँदै (2070)
O M G << हेलिकप्टरबाट उद्दार गरिएकी गर्भवती महिलाको अस्पताल नपुग्दै मृत्यु: (1853)
श्रीमानले पि’टेर भागेपछी लक डाउनमा आमा छोरीको यस्तो बिचल्ली, मनै रुवाउने भिडियो हेर्नुस (1406)
सिन्धुली खुर्कोटकी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबाको लोभलाग्दो काम ! सयौ मजदुरको उद्दार (1361)